DIGAAGGA HILIBKA YAR-YAR: SAWIRRADA IYO SHARAXAADA CALEEMAHA, DABEECADAHA IYO SIFOOYINKA NOOCYADA KALA DUWAN - B76, CADDAANKA B66, BAWAAR BEEL LEH WAX SOO SAARKA UKUN MACQUUL AH - BEERAHA DIGAAGA
Dhamaan waxa ku saabsan hilibka hilibka-hilibka: sawir iyo sharax, astaamaha noocyada kala duwan iyo noocyada kala duwan - V76, cad v66, fawn в77
Dunida casriga ah, digaaga taranka waa suurtogal, ma aha oo kaliya warshadaha iyo beeraha, laakiin sidoo kale goobaha magaalooyinka. Inta badan, digaagga waxaa lagu rusheeyaa guryaha gaarka loo leeyahay, halkaasoo milkiilayaashu leeyihiin dhulka si aad u dhisi kartid digaag digaag ah oo aad ku dhajiso meel loogu talagalay socodka.
Digaagga hilibka yar-yar ayaa helay sumcadda ballaadhan ee beeraha maxaa yeelay waxay ka faa'iideysanayaan xaaladooda xabsiyada iyo aan qabin. Waan ka wada hadli doonaa arrintan si faahfaahsan ee maqaalkan hoose.
Sidee u yimaadaa?
Tani waxay ka mid ah digaagaa lagu soo ridayaa Ruushka. Xulashadeeda waxay ku lug lahayd Machadka Duqa ee Dugaagga Zagorsk, oo ku yaala gobolka Moscow. Dibedda, digaagga hilibka-hilibku waxay noqdeen kuwo caadi ah wax yar ka dib. Iyo dalalka qaarkood, digaagga ayaa ku dhawaad ​​ka sarreeyay hilibka caadiga ah ama ukunta.
Aragtida muuqaalkan waxay ahayd dareenka wershadaha digaaga, sababtoo ah Beeluhu waxay hore u kiciyeen bacriminta ma siin wax soo saarka, labadaba wax soo saarka ukumaha iyo tayada hilibka. Waxay si dhakhso ah u badiyeen jacaylka beeralayda maxaa yeelay waxay ku raaxaystaan ​​mawduucooda. waxayna xitaa noqon kartaa mid ku habboon kuwa bilawga ah ee ganacsigan.
Tilmaamo kala duwan
First of dhan Muuqaal iyo muuqaal muhiim ah ee digaagga sida waa koritaankooda degdeg ah. Inkasta oo shimbirku wax yar cuno marka la barbardhigo digaagga kale ee digaagga, laakiin miisaankoodu wuxuu aad uga dhaqso badan yahay da'da, laakiin waa nooc ka duwan.
Celcelis ahaan, 2 bilood, roosters waxay ku heli karaan miisaanka illaa 2 - 2.5 kg, iyo digaagga 1-1.5 kg. Oo waxaa jira noocyo digaag hilib ah, kaas oo gaari kara da'adan 3 kg ama ka badan.
Waxay kufilan yihiin noocyada quudinta. Waxay dareemaan wax weyn haddii ay isticmaalaan isku darka feederiyada caadiga ah, labadaba horay u takhasusay oo gacanta lagu qasay. Tani waxay ka kooban tahay digaagga ayaa sidoo kale lagu kala duwan yahay dheefshiidka sare ee cuntada iyo dheef-shiid kiimikaad deg deg ah, taas oo ah sababta ay u cunaan cunto yar. Oo ay tarankoodu uu noqdo mid faa'iido u leh beeraleyda digaaga iyo qiimo jaban.
Digaagga Kuwani waxay ku kala duwan yihiin xaqiiqda ah in ay ku jiraan inta badan baqashada. 1 mitir oo laba jibbaaran ayaa lagu beeray karaa 10-11 digaag. Laakiin waxay dareemaysaa weyn oo xor ah oo ka mid ah guriga hen.
Si looga hortago cuduro kala duwan, waxaa haboon in la nadiifiyo, labadaba baqashada iyo dhammaan coop digaaga, maxaa yeelay digaagga ayaa aad u xasaasi u ah cudurada. Tani waxay u sabab tahay physiology gaar ah ee shimbiraha.
Qaar ka mid ah kooxaha caanka ah
Jawaabaha 3 kooxood ee ugu horreeya ee noocooda ah sida ay u gaar yihiin VNITIP (warqadda ugu horeysa ee "B" ee cinwaanka) dhammaan sifooyinka caanaha waa kuwo la mid ah wax soo saarka, soo saarista iyo tilmaamayaasha kale, laakiin waxay ku kala duwan yihiin midabka koontada.
Noockani waa digaag-hilib hilib, inkastoo ay tahay mid guud ahaan ah noocyada hoose ee kale, laakiin waxaa loo aaneyn karaa in badan oo hilib hilib ah.
Waxay leeyihiin lafo xoog leh iyo naas aqoon leh, lugaha way gaaban yihiin, laakiin xoog leh oo sax ah ayaa loo qoondeeyey, sida dhammaan noocyada hilibka yaryar. Midabada noocan oo kale ah waxay noqon kartaa caddaan. Halka kale ee joogitaanka bucooyinka ku jira dabada, baalasha ama dhabarka ayaa laga yaabaa inay muujiyaan guurka.
Heerarka ugu muhiimsan ee lagu dhawaaqay:
Wax soo saarka ukunta ee celcelis ahaan qiyaastii 180 xabbo sannadkii, laakiin beeralayda daaqsinka ah ee khibrad leh ayaa sheegaya in ilaa 260 xabbo sanadkiiba in lagu gaari karo daryeel wanaagsan iyo quudinta.
Miisaanka qaangaarka ee qaangaarka ah wuxuu gaaraa 3.3 kg, iyo digaagga ilaa 2,7 kg.
Ukun weyn, aan ka badnayn 65 garaam.
Wuxuu bilaabaa inuu ku dhasho da'da nuska sanno.
2 ilaa 3 bilood shakhsi ayaa miisaami kara 1.3 kg ilaa 1.6 kg.
Bacriminta ugu badan ee ukunta waa qiyaastii 93%.
Xayawaanka yaryari waxay ku noolaadaan 85% kiisaska, laakiin beeralayda daaqsinka ah ee khibrad leh ayaa sheegaya in dhammaan sifooyinka iyo daryeelka saxda ah, boqolkiiba ay sareeyaan.
Cunto qaadashada waa mid aad u weyn oo qiyaas ahaan 35% - 45% ka yar marka loo eego noocyada kale ee shimbiraha.
Hayso dhadhan sare oo hilib ah.
Shimbirahaasi waxay u egyihiin sida kuwa kale oo ka mid ah caanahan, laakiin waxay leeyihiin xayawaan cad oo leh soodhawraad. Isku dhafan adoo ka gudbaya aabaha B77 iyo lineka hooyada B66. Asal ahaan, dhammaan sifooyinka ayaa weli ah isla sidii B66.
B77 iyo wax soo saarka ukunta
Shimbirta caanahaani waxay leedahay cufnaanta caleemaha cufan ee cufan leh hyo dahab ah, sida sharaxaadda caleenta ciriiriga ah ee digaagga. Qaadasho iyo xulasho. Dhamaan sifooyinka kale ee B77, oo ay ku jiraan wax soo saarka ukunta, waxay la mid yihiin B66. B77 kale ayaa lagu magacaabaa subagyada kaneecada ah ee digaagga ee digaagga.
Fiiri sawirada noocyada kala duwan ee digaagga hilibka:
Si shimbirku u dareemo raaxo iyo caafimaad waxaa lagama maarmaan ah in si habboon loo ilaaliyo, si looga hortago dhacdooyinka cudurada waqtigooda oo dhan iyo si buuxda u quudiyo.
Digaagyada yaryar ee hilibka yar ayaa aad u jecel sariiraha diiran oo qalalan, sidaas awgeed xilliga qaboobaha waxaad u baahan tahay inaad si taxadar leh u diiriso qashinka digaaga, iyo xagaaga, iska hubi in digaagga aysan ku socon roobabka roobka, maadaama ay cayayaanka yihiin 30% - 40% hoose marka loo eego digaagga kale, sababtoo ah waxay yihiin darajo hoose. Sidaa darted, shimbirta ayaa xajin kara qaybta caloosha ee dhulka qoyan oo qabow.
Waa lagama maarmaan in qafiska ama guriga waxaa jiray qubeys ka buuxsamay ciid, sidaa darteed shimbirta waa la nadiifin karaa, tan iyo shimbirta shimbirta ah ayaa had iyo jeer ka badan inta badan marka la barbardhigo digaagga caadiga ah.
Buulaha digaaga waa inay ku yaalliin heerka caadiga ah ee qiyaastii 60-70 cm dhulka. Nadiifinta guud iyo nadiifinta coopda digaaga iyo socodka waa in la sameeyaa inta badan sida caadiga ah, waxaa lagula talinayaa inaad tan sameyso mar sanadkiiba, sida digaagga hilibka yaryar sida nadiifinta.
DAREEN! Digaagga yaryar ee hilibka yar ayaa si xun u duulaya oo aad ugu xidhan guriga, markaa ha ka baqin inay u oggolaadaan inay tagaan xoriyada bilaashka ah, sababtoo ah suurtagalnimada inay u duulaan ama ay lumaan way yar yihiin!
Hal shimbir ayaa ku filan 130 grams oo cunto ah maalintii. Waxaad quudin kartaa raashin khaas ah iyo hadhuudh caadi ah oo lagu daro macdanta iyo fitamiinada dheeraadka ah. Xilliga xagaaga, waxaad siin kartaa digaag bilaash ah haddii ay macquul tahay. Waxay cuni doonaan xididdada caleemaha, caleenta caleenta, khudaarta cagaaran. Oo weliba shimbirta waxay jecel yihiin in cayayaanka farxadda leh, oo cunto qummanna waxaa dushiisa ku noolaysa qandho, iyo duufaan, iyo dacas, iyo dibiyo.
Xilliga jiilaalka, digaagga waa in la siiyaa hay. Haddii quudinta gacmaha lagu qaso, markaa waa inaad ka taxadartaa joogitaanka kalluunka ama cuntada lafaha, feeraha, ukunta. Xayawaanka yaryar waa inay cabbaan fitamiinada dheeraadka ah. Tani waxay xaqiijinaysaa habeynta lafaha habboon iyo koritaanka wanaagsan.
Haddii cuntada digaaggu ay u dheellitirnayd, markaa digaaggu wuxuu bilaabi karaa dushooda ugxantooda. Haddii tani dhacdo, ka dibna mustaqbalka shimbirku wuxuu sii wadi doonaa "karbaash" xitaa haddii aad saxdo cuntada. Sidaa darteed, waxaa fiican in lagu shubo sida shimbir shooga ah oo kale, ama ka duxi ka hor inta la gowraco oo la xoqdo.
Digaagga hilibka ee ugu yar waa chicks qurux badan, si ay u siiyaan ukumaha si wanaagsan oo ay daryeeli karaan digaagga. Haddii aad soo iibsato Cornish cuuryaan ah oo cirif leh, waxaad heli kartaa broth-baraf cad. Laakiin beeraleyda qibrad ee khibrada leh ayaa kugula talin kari waayey hiddaha hiddaha hilibka digaaga hilibka yaryar, maadaama ay lumin karaan heerarkoodii la sheegay iyo digaagga digaagdoon.
Caawimaad! Markaad ka gudubto digaaga hilibka yaryar oo leh jajab kale oo jilicsan, farcankiisa badanaa iyo waqti dheer ayey jiran karaan, maadaama nidaamka difaaca shimbirku uu kufilan yahay ugu horeyntii, iyo dhalinyaradu waxay noqon karaan kuwo liita oo si liidata u kora.
In kasta oo xaqiiqda ah in digaagga ay yihiin chicks ugu fiican, waxaa jiri kara shakhsiyaadkaas oo kale oo gebi ahaanba aan rabin in ay ku kulmaan. Sidaa darteed, haddii aad rabto in aad bixiso wax-isdaba-marinta naftaada ama iibka, ka dibna waxa fiican inaad iibsato kulubka.
Kuleyliye wanaagsan ayaa ukunteeda u jeedin doona isla markaana ilaalin doonta heerkulka iyo qoyaanka. Chicks chatched ayaa ka tagay naqshadeeyaha ilaa ay si buuxda u qalalaan., ka dibna lagu shubo sanduuq leh ileys dheeraad ah ee laydhka infrared.
Guud ahaan, taranka taranka ee hilibka yaryar ma samayn doono dadaal badan, maaddaama heerka badbaadada ee xayawaanka yaryar iyo bacriminta ukumuhu ay yihiin heer sare.
Noocyada hilibka yaryar ee hilibka shimbiraha ah waa mid guud oo sifooyinkiisa ah iyo siyaabo badan ayaa uga sii dari kara digaaga caadiga ah ama hilibka. Sida laga soo xigtay dib u eegista, waxay u qalantay jacayl caalami ah oo ka timid beeraleyda gaarka loo leeyahay oo kaliya ma ahan. Iyada oo dayactir haboon, shimbirahaas dwarfkani waxay ku farxi doonaan ukun dhaadheer iyo hilib dhadhan fiican leh.
Qaab dhismeedka beerta guga beerta guga
Mushinka caddaanka ah ee cufan: waa la cuni karaa ama maahan
Waa maxay sababta qafidheerka iyo sida loo daaweeyo
Dhirta cajiibka ah ee koraya ayaa kor u kacaya. Sida loo beeray yaanyo daboolaya?
Waxaa jira siyaabo badan oo loo soocayo kaabajka. Midda ugu fudud iyo ugu dhakhsaha badan waa habka uu kidhku si toos ah ugu dhejiyo weelka oo lagu buuxiyo marinade. Iyada oo habkan, Kaabashka waa mid casiir leh, caws iyo aad u dhadhan fiican leh. Faa'iidooyinka kaabajka lafdhabarta ayaa aad uga weyn tan la kariyo. Read More
Waa maxay orchid casaan, sidee buu u ekaan karaa sawirka iyo maxay yihiin sifooyinka beeritaanka, dhirta, iyo sidoo kale iyaga daryeela?
Nadiifinta Qalabka guriga ee loogu talagalay qashinka, aerosolka iyo waxtarka sareeya
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Beeraha digaaga 2019